Truth be known: ဖတ်မိတာလေးတွေ
Posted by generation96 at 12:49 PM
i really like this fact.
actually, one of my burmese colleague in work has portugese blood mixed. hehe..
i m portuguese descent :)
3:24 AM, November 11, 2006
အင်း..ဗမာမလေးတွေလည်း ခုလောက်ဆို ပေါ်တူဂီ ကိုကိုတွေ ကျေးဇူးနဲ့ ဟိုရောက်ချင်ရောက်နေမှာနော်။ ပေါ်တူဂီ ဘောလုံးအသင်း အင်္ကျီဒီဇိုင်း ထုပ်တဲ့သူမှာ ဗမာသွေးများ ပါလေသလားလို့။ ယောဂီရောင်ကြီး လုပ်ထားလို့လေ။ ဟီး..
11:34 AM, November 11, 2006
let's call heraheroine. martyr is used more for dead, i supposed. we can't afford to let her die, can we?